စတင်ပြုလုပ်ခြင်းမူဝါဒကကာတာလနိုင်ငံရေးကိုCatalonia များအတွက် Pedro Sanchez စီမံကိန်းနှင့်ပါဝါနေ
8 ဇူလိုင်လ 2018 Belz ကာတာလနိုင်ငံရေးကို 0
La ကာတာလလွတ်လပ်ရေး, စိတ်ထိခိုက်ခြင်းနှင့်စပိန်ခွဲခြာခုတ်ဖို့သွေးဆောင်မှုမှမသိဘဲ, ဖြေရှင်းချက်ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် .. ပြီးတော့လူတမျိုးဆက်စပ်ပါဘူးတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်သည် ?.
A Catalonia သူတို့ကအလွယ်တကူနစ်မြုပ်သို့မဟုတ်သင်ျဂွိုဟျပုနျကနျ၏မြင့်အသံနှင့် cleavage simulating ခွဲမယ်လို့အတိုင်း, တစ်ဦးရှေ့ကိုလွမ်းဆွတ်မှုကပြောင်လှောင်ဒဏ်ဍာရီလေဖြတ်အောင်လုပ်ရန်နိုင်ခြင်းရေနစ်လိမ့် tutelada နှင့်တစ်ဦးမှမဖြတ် Espana ထို့အပြင်အဆိုပါစေ့စပ်ညှိနှိုင်း Templar ၏ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် slavish မူဝါဒ၏သြဇာ scoundrels တူတဲ့အခြားဖောက်ပြန်ချမ်းသာကြွယ်ဝ Rosicrucians တို့တွင်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမဟုတ်အရှိဆုံးအသိဉာဏ်ဖောက်ပိုင်မှထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်မဟုတ်မီဒီယာအတွက်ထုတ်ကုန်ဆုံးခြင်းနှင့်မြုံ။
သူတို့ Pause နဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းစပိန်နှင့်အတူ "နစ်နာမှု" ကြိုးစားကြည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးမွေးဖွားရာပြည်သူတို့ကိုယ်သူတို့သံသယဘာမှခုခံကာကွယ်မအမြဲဗလာတုတ်ကျင်းမြတ်နိုးသောသူအရေးမယူနေထိုင်သူများသရုပ်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါကျွန်းဆွယ်၏မြို့သားခံစား၏ Self-သတိစိတ်ကူးနှင့်အတူငါ lidiarlo ရှေ့မှာထိုသူကိုအရှက်တဲ့သိုးခွံထဲမှာအထီးကျန်နှင့်အထီးကျန်တဲ့ပထဝီကဲ့သို့သောနွားထီးတကောင်ကနေဘယ်နေရာမှာမဆိုစိတ်ပျက်ဖွယ်သစ်ကို "အသားအရောင်ခွဲခြားရေး" အကြောင်း misgivings ထ ယင်း၏ကျွန်းများ, မကျေနပ်, သဘာဝ ungovernable နှင့်ပိုပြီးသိုးသငယ်တို့ကိုလူကြီးလူကောင်းထိုကဲ့သို့သောပြုံးအတူဘယ်တော့မှသုံးစတုတ္ထ, မျှော်လင့်မထားတဲ့ဗီဇအတိုင်း၏ဆံပိုင်အာဏာကိုသိုးထိန်းနောက်သို့လိုက်ရန်ဝင်ရောက်ခြင်း, ဆုံးဖြတ်ချက်များ၎င်း၏မရှိခြင်းများအတွက် lingers သောတိတ်ဆိတ်ကိုယ်စားပြု Pedro Sanchez .. y က Cia-ကိုယ်စားပြုတယ်။ , ကိုင်ဆောင်သူကို ABS မြေပြင်နှင့်အတူသိုးစုကိုဦးဆောင်သူကို, သူ့ထိုးနဲ့ဖော်ရွေပုံပန်းသဏ္ဌာန်ထ မြက်, ကအိုင်ဒီယာများခြောက်သွေ့ဆိတ်များနှင့်ပြည့်စုံသည်နှင့်လုံခြုံကင်နှင့် butifarrada အများကြီးနဲ့ကင်ပေါ်သွေးဆောင်မှုကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်း, အဘယ်သူမျှမ amplisimo ခိုငျခံ့သောလယ်ပြင်၌ပျောက်သွားနိုင်သောအခါ, မှန်ရာကို၏စည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်ဖြစ်ကောင်းဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်မဖြစ်နိုင်တော့ကတိပေးထားပေမယ့်, ပိုပြီးသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသည့် disenchanted ၏ hungriest ကြိုက်နှစ်သက်မယ့်အိမ်လုပ် "aioli" နဲ့ drizzled နှင့်အရှင်နားရွက်ညစ်ပတ်ဖြစ်ကြောင်းကြားနာငြီးငွေ့လွတ်လပ်ရေးသင်ဘယ်မှာအားလုံး၌တရားစွဲဆိုခြင်းပါတီမှာပြောနေတာဖွင့်အဘယျသို့နားမလညျနိုငျပါသညျ ကိုယ်တိုင်ကဖိတ်ကြားထားသည်။
ကျနော်တို့ကိုသူတို့ကအမြဲအရည်နှင့်ဝမ်းနည်းစွာမလိုအပ်သောသွေး, flasfemias, ညျ့စုံအမိန့်, ငြူစူခြင်း, ပရမ်းပတာ, ဖိနှိပ်မှုဆန့်ကျင်သေးငယ်တဲ့ပါးစပ်နှင့်အတူ muffled အော်သံ, ကျွန်ပြုမှုနှင့်သာယာဝပြောမရှိခြင်းနှင့်အတူဖြေရှင်းခြင်းနှင့်လက်ဆွဲပြီလွတ်လပ်ရေးထင်ဟပ်သောအရာကိုသမိုင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားပါလျှင် ထိုစုံစမ်းနှောင့အမူအရာတို့သည်သို့ကျဆင်းအကြမ်းဖက်ပေါ်ထွန်းပြီးနောက်မိဖို့နှုတ်ဆက်နဲ့အတူအဆုံးသတ်မည်မဟုတ်ကြောင်းကဲ့ရဲ့သံသို့ကူးပြောင်းလွတ်လပ်သည့်လစ်ဘရယ်ဝါဒဘာသာရေးထုံးတမ်းတောင်းဆိုအတွင်းမှထွက်ကနေငွေကြေးထောက်ပံ့သောသူတို့က, နေဖြင့်ဖြန့်ချိမပေးကြောင်းကော်ပိုရိတ်ဘဏ္ဍာရေးအပါအဝင် ငွေပုန်ကန်ကြည်ကြည်မဟုတ်ခဲ့လျှင်တွင်း၏အတိုက်အခံများနဲ့ပြောင်းလဲ, ဘုရင်စနစ်နှင့်အတူ hilt ဓားကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာကြီး။ အရာအားလုံးအဓိကရုဏ်း၏ဗိသုကာတူညီခဲ့အဖြစ်ဝင်ရောက်စစ်တိုက်ပြီးသားသူတစ်ဦးမျှော်လင့်မထားတဲ့ jiffy အတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရဘယ်သို့သောအားဖြင့်အနိုင်ရခဲ့သည်သို့မဟုတ်အထင်ကြီးခဲ့ပါတယ်ရှေ့မှာရန်သူအဘို့အဘယ်သူမျှမလေးစားပြသခဲ့သည်ဘယ်တော့မှတစ် revanchist နှိုးဆွကမရေအချိန် ဝင်. ယင်းနှင့်အတူ တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်နှင့်တကွ, ကမ္ဘာသစ် Bolivar, စန်းမာတင်, ဒွါတဲများနှင့်လွတ်လပ်ခွင့် aupada ၏ကျေးဇူးတင်သတင်းစကားကိုစွဲလန်းနှစ်သက်များစွာသောအခြားတမန်တော်များ၏ဆန်းကြယ်မှုများဘိုးဘေးများ၏အဆင့်ကိုမရကြီးပြင်းလာရသောငါတို့အဘတည်းဟူသောနှင့်သန့်ရှင်းသောပုတီး, ဆုတောငျးလေ၏လက်၌အနနေဲ့ဘာသာရေးအမေး ခွင့်လွှတ်ပေမယ့်မအူမကြီးဆန့်ကျင်ဇာတိအမျက်ဒေါသနှိမ်ခြင်း, သူရဲကောင်းနျ -Mapudungun ဒဏ္ဍာရီအဖြစ်, ထိုကဲ့သို့သော Lautaro ၏ dismember ပူဇော်သောယဇ်, ယနေ့စပိန်အကျိုးစီးပွားကျေးရွာများအတွက်ပန်းပွင့်လျှပ်စစ်မီးပွား inverted သည်အထိချီလီစစ်ဆေးမှုများအတွက်ခဲ့ရပြီးရှိကြောင်း, ကန် နှင့်လှောင်ကန်။
မရှိနယ်နိမိတ်ဖြစ်ကြပြီးတစ်ဘုံနယ်မြေ၏ခွဲဝေမှုတစ်ခုခြယ်သကြပါပြီသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံ fragmenting မှလှူဒါန်းခဲ့ကြသူများပြားအနုပညာရှင်များကပြောင်းလဲ, တကဖျောထုတျအတွက်ရှုမြင်သုံးသပ်ကြတဲ့ဒဿနဖြင့်လိုက်ပါသွား, ပြီးသားတောင်အမေရိကမှာကြီးပြင်းစံနမူနာလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်ထုတ်လုပ်နေသည်ဆိုပါက ပြည်တွင်းစီးပွားရေး imprecise တစ်မှုန်ဝါးခကျြအောကျကိုတှေ့မွငျနိုငျသောအပေါ်အဆုံးပတ္တူ, ယခုလုပ်မယ့်လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ကြာချိန်အဘို့အစစ်များ၏လွန်ဆွဲထဲမှာလူကြိုက်များခုခံဖို့သင့်လျော်ချိန်ခွင်လျှာနှင့်အတူဘဏ်မှာငွေစုအကောင့်ထဲမှာ computerized သည့်စည်းကြပ်ကိုအသုံးပြုသည် ပိုကောင်းတဲ့သူမြား၏ Self-အလိုတော်အားဖြင့်ရှာဖွေနေတစ်စက်သေလွန်သောသူတို့သည်တစ်ဦးအပြစ်မဲ့နိုင်ငံသားရှောင်ရှားတစ်ခု Andorran-afrancesado စိတ်ဝိညာဉ်နှင့်အတူဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်မည်ဖြစ်ကြောင်းသောသတင်းစကားများ၏ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလို့, လိုအပ်သောထက်ပိုပြန်သွားဖို့မက်ဆေ့ခ်ျကိုနှင့်ယူ နောက်ပိုင်းမှာနောင်တမဆိုတော်လှန်အိပ်တန်းကိုညွှန်ကြား။
ထို့ကြောင့်, ဤမျှလောက်ဒဏ်ဍာရီ, tragicomedy နှင့်စံပြစိတ်ဖောက်ပြန်, ငွေကိုအဝါရောင်စာနယ်ဇင်းလင်းမှုမရှိခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုမရှိခြင်းနှင့်အတူ, gualda ကကျွန်တော်တို့ကိုတစ်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ် ဖက်ဒရယ်ပြည်နယ် Catalonia အဘို့အသင့်တော်ဆုံးနဲ့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ် တစ်ဦးဖြန့်ဝေအကြံပြုခြင်းမတိုင်မီ "Roly-Poly" ဒီထက်အချိန်ဖြုန်းပိုပြီးကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုလည်းမရှိဘယ်မှာဂျာမဏီနှင့်အခြားဒီမိုကရေစီဥပမာအဖြစ်စကားပုံ, ပြောင်းရွှေ့ခြင်း, ဗဟိုပါလီမန်, ပေါရာဏအထက်လွှတ်တော်နှင့်ကြမ်းတမ်းဘယ်တော့မှခဲ့သူတစ်ဦးသည်ရှင်ဘုရင်ထံမှအများအပြားဧည့်သည်များချွေတာ, အချဉ်အနံ့နှင့် ကျွန်တော်ချော့မော့သောအခါကြှနျုပျတို့ထမ်းလေ့ရှိသောအဖြစ်, နောက်ကျောအပေါ်တစ်ဦးခြစ်ခြင်းမရှိဘဲအများကြီး pantomime မပါဘဲတစ်ဦးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လက်ဗလာပေးခြင်း၏အမူအရာ, ဒါမှမဟုတ်ပွေ့ဖက်ညှိနှိုင်းရန်နှင့်စမ်းသပ်ဖို့ရှိခြင်း, အခွင့်ထူးများနှင့်လိုအပ်သောကာကွယ်ရေးအရ wiles ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လေးစားကြသည်မဟုတ်။
ထိုမျှမကကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်အချက်အလက်များ၏မရှိခြင်းများအတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဟုတ်မှန် ဒါဟာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ, နိုင်ငံသို့မဟုတ်ဖယောင်းတိုင်မှမီးကိုသတ်မှတ်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်လာကြသူလာမယ့်တိုက်ပွဲ elucidate ရှိရာမှောင်မိုက်ဂူသို့ဝင်ပေါက်စေရန်မေတ္တာရှိတဲ့နယ်မြေ၏ခွဲခြာထောက်ခံမှလုံလောက်သောအများစုနဲ့အတူလှုပ်ရှားမှုများအတွက်လူမျိုး၏ ကုန်းတွင်းပိုင်းခဲ့ကြတယ်။ ငါတို့အဘို့အကမဖြစ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့ကျနော်တို့က Legion အားဖြင့်လာလျှင်မျက်မြင်သက်သေများဆုံးရှုံးဖို့အနည်းငယ်သာရရှိအရာအားလုံးရှိသူတို့ဖို့အကောင်းဆုံးအဖြေဖြစ်မဟုတ်ကြောင်းသေနတ်သံများ၏တရစပ်ကြားနာကိုကြောက် feeling ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွအေနေကြသည်ကိုထင်ရှားစွာပြမည် နယ်ပယ်နေဆဲရှိသည့်အခါသွေးနှင့်မီးနှင့်အတူဘာစီလိုနာ၏ပင်လယ်ပြင်၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်းထဲမှာအမှား, ရည်ရွယ်ချက်နှင့်တစ်ဦးကိုတင်ပြခြင်းနှင့်ရောင်းဖို့အဆိုပြုချက်ကို ဖက်ဒရယ်သမ္မတနိုင်ငံဒီချမှတ်ခဲ့ခြင်းနှင့်အများကိန်းစွပ်စွဲလိုအပ်ချက် join ကြောင်းတပ်ဖွဲ့များကကျောထောက်နောက်ခံပြုကအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်။ အဆိုပါရဆေိုးမှတဆင့်သတိနှင့်အတူ casposas ရန်ငြိုးထားခြင်းကိုဖြေရှင်းဖို့ဘယ်လိုမသိ၏ရလဒ်ကို run ဖို့မဆန္ဒနှင့်အတူအားလုံးနှင့်တဲ့အခါမှာအဆုံးပေါ်ရှိ "ဆံပင်" ချပြီးမှာကျွမ်းကျင်ထိတ်လန့်ခြင်းနှင့်လမ်းပေါ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်စေတဲ့ရောဂါလှောင်ပြောင်အကြမ်းဖက်နိုးမည်မဟုတ် သငျသညျက Molotov ကော့တေးတင်ဆောင်လာသောထောင့်ပြီးနောက်ပေါ်လာကြည့်ပါ။
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ နားမထောင်အရှုံးမပေးနောက်ပိုင်းတွင်သဘောတူဖို့ညှိနှိုင်းမှုနှင့် hove အတွက်အသုံးမပြုနိုင်ဖြစ်လာဖြစ်ပါသည်, ဂိမ်းသစ်ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအဆိုပြုဖို့ခလုတ်ယန္တရားပြုပြင်မရှိဖြစ်နိုင်ခြေအတူအားလုံးအားဖွင့်ထားပြီးနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ဘာမဆိုအနိုင်ရပျက်ကွက်ခြင်းဖြင့်ရှုံးနိမ့်ခံစားမိမနိုင် အဆိုပါယူဆအဖြစ် unwillingly ဖန်တီးလေးပုံတစ်ပုံမရှိဘဲစစ်ချင်တယ်, ငါတို့ရှိရာ screw နှစ်ခုနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွက်ရူးသွပ်သွားနိုင်အချို့သောခါးပိုက်နှိုက်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအဖြူရောင်လက်အိတ်၏အမှန်တရားဇာတ်နာအောင်ပြောခြင်းပြပွဲနှင့်ကြည်ကြည်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖျက်ဖို့အသုံးပြုတဲ့မသေချာလှအမှားကိုအမှန်အားဖြင့်လူမဆန်စွာ ramming ဦးခေါင်းထားပြီးသူတို့လိမ်ခဲ့ပြီးသောများအတွက် function ကိုထွက်လျှော့ခြင်းနှင့်မြည်းကြိုးကိုဖြည်ပြေးဖို့စတင်ပါပြီပေးပို့သတင်းကိုအများကြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုခံစားဖို့နှိုးဆော်သံအသံနှင့်မြေပေါ်မှာကျသွားလျှင်, သင့်လျော်သောပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တင်းကျပ်တဲ့ကကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဖြစ်ပါသည် ဒါဟာအခွင့်အာဏာကိုလိုအပ်မှအထူးသဖြင့်အခါ, ယေဘုယျအားစစ်တပ်အဖြစ်ပြုမူ ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုနှင့်သမ္မာသတိသည်မျှမမည်သူမဆိုပေးပို့ပေမယ့်သောင်းကျန်းသူရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းအရည်ပျော်ရာကြက်သားကြက်ဥသို့မဟုတ် pastelina သံမှတုန်လှုပ်စေသောနှင့်အတူချုံခိုတိုက်ခိုက်မဟုတ်ရှိရာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွက်စောင့်ဆိုင်းမရှိ။
ကံမကောင်းစွာကိုက်ညီမှုများနှင့်သမ္မာသတိ, အသဘောတူညီချက်များတွင်အသုံးပြုကိန်းဂဏန်းများကိုယ်စားပြုကတ်များကစားနေကြသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်သင်သည်မထိုက်မတန်မြင်သည်အတိုင်းသူတို့ကိုပျောက်ကွယ်သွားစေရန်မဟာဗျူဟာအတွက်, မထောက်ခံကြောင်းအရည်အချင်းမရှိတဲ့နှင့်အခြား "လောင်းကစားသမားတွေ" ထိန်းသိမ်းထား, ထိုအတောအတွင်းနှင့်တစ်ခုမဟာပြီးနောက်မျှော်လင့် နောက်ဆုံးဖြေရှင်းချက်အဖြစ်အမြဲခန်းခြောက်ခြင်းနှင့်မှခွဲ၏နေ့စဉ်လမ်းကြောင်းထဲမှာပေါ်ထွန်းသောဂိမ်းထဲမှာချိုး, အားဖြင့်ဒီ "pujolista တီထွင်မှုအဆုံးသတ်မတိုင်မီအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကြီးထွားသွားနေသောသစ်ကိုဆိုရှယ်လစ်ဖက်ဒရယ်ဝါဒီများ၏လက်ခုပ်သံ ငါသာဝိသေသလက္ခဏာ၏နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွဲပြားမှုနှင့်အတူသစ်တစ်ခုပါဝင်သည့်ပြည်နယ်မှကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သောအမည်မသိမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်သည့်ပန်ဒိုရာရဲ့ box ကို "" ဟာ၏အောက်ဆုံးအတွက်ယခုအချိန်အထိဝှက်ထား, "အစိမ်းရောင် baize အပေါ်တရားမျှတမှုကြား အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုဆက်နွယ်နေတဲ့ကာတာလနိုင်ငံရဲ့ထင်စေသည်။ ထိုအလျှင်မ, ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနှင့်သစ္စာရှိမှုဆိတ်ကနေသိုးသငယ်တို့ကိုခွဲခြားသည်အထိ run မဟုတ်နေစဉ်။
20 နိုဝင်ဘာလ 2018 0
ဒီartículoTweet13ဓာတ်ခွဲခန်းကျင့်ဝတ်၏၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် Code ကိုလိုက်နာခြင်းနှင့် 2018 အားလုံးအမည်များကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပါလိမ့်မည်သည့်အတွက်ပထမနှစ်တွင်ပါလိမ့်မယ်လွှဲပြောင်းလက်ခံရရှိသူကိုဆရာဝန်တွေများ၏အမည်များဖုံးကွယ်ရန်ပျက်ကွက် Share [ ... ]
3 စက်တင်ဘာလ 2018 1
"ငါသည်ကြောင့်ငါဖြစ်၏ထင်" နှင့်ငါကျင့်ကိုကျင့်လျှင် .. အဘယ်ကြောင့်ခွင့်ပြုအပေါင်းတို့၏အကျိုးအတွက်ကျနော်တို့ဦးတည်သွားစေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အခွင့်အရေးကိုအားမနာသူတွေထဲမှာဖြန့်ဝေလျက်ရှိသည်ဒီartículoTweet Share ?. ရောက်ရှိ [ ... ]